विजय सरावगीकाे सपना- विकसित वीरगंज ! (भिडियो संवाद)
HOME » विजय सरावगीकाे सपना- विकसित वीरगंज ! (भिडियो संवाद)
वीरगञ्ज । विजय सरावगीलाई वीरगंज महानगरको मेयरका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ। नेपाली कांग्रेससँग उनको निकट टक्कर हुँदैछ।
सरावगी जित्नेमा ‘कन्फिडेन्ट’ छन्। ‘अन्य दलका प्रतिस्पर्धीले पनि मेरो जित निश्चत भनिसकेका छन्,’ डिसी नेपालसँगको यो संवादमा सरावगी ढुक्क छन्-‘जित्ने पक्का भैसक्यो, अब कति मतअन्तरले भन्ने मात्रैको कुरा हो।’
‘विजय भएनन् भने अजय पक्का, अजय भएनन् भने विजय पक्का।’वीरगंजमा व्यक्त मत हो यो। विजयको टक्करमा छन् अजय द्विवेदी। उनी नेपाली कांग्रेसका मेयर उम्मेद्वार हुन्। विजय र अजयबीच निकटको टक्कर पर्ने अनुमान छ।
सासु बुहारीको झगडा कम गर्छु !
सफल व्यावसायीका रूपमा सरावगीको छवी वीरगंजमा मात्रै खुम्चिएको छैन। उद्योग बाणिज्य संघको देशव्यापी नेटवर्कमा उनी परिचित छन्। त्यो भन्दा पर छिमेकी भारतमा समेत उनको ‘अच्छा पहिचान’ छ।
वीरगंजका हरेक घर र हरेक हातमा रोजगार सुम्पने उनको योजना छ। देशव्यापी प्लस छिमेकी भारतसम्म फैलिएको उनको व्यावसायिक पहिचान र लगानी भित्र्याउन सक्ने ल्याकतलाई उनले आफ्नो ताकत बनाउने बताउँछन्।
वीरगंजका घरघरमा रोजगार सृजना गर्न खासै कठिन नहुने बताउँदै उनले हालसम्म पहल नभएर मात्रै प्रचुर संभावना ‘वेस्ट’ गएको बताउँछन्।
‘काम नभएपछि घरघरमा सासु बुहारीको कलह हुन्छ नि, हो त्यसको म अन्त्य गर्छु, खाली बस्नेहरूलाई हातहातमा काम दिएपछि झगडा रोकिन्छ।’ उनले रोजगारी र वित्तीय उकास आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको सुनाए। विदेशिने युवालाई रोक्नका लागि वीरगंजमा प्रसस्तै संभाव्यता रहेको उनी बताउँछन्।
सासु-बुहारीको झगडा रोक्ने उनको नारा सिम्बोलिक छ। बेरोजगारी समस्या नै अशान्ति र गरिबीको कारण हो भन्ने उनले राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले रोजगारी बढाएर मात्रै शान्ति र उन्नति प्राप्त हुने उनको निचोड छ।
संघीय समाजवादी फोरमबाट सरावगी मेयर उम्मेद्वार बनेका छन्।
५० बर्षमा हुन नसकेको काम ५ बर्षमा गर्छु
पुराना राजनीतिक दल र लामो समय राजनीति गरेका नेताहरूको तुलनामा सरावगीको राजनीतिक करियर मात्रै ६ महिनाको छ। उनको दल फोरम पनि नयाँनौलो नै हो। तर सरावगीले यो संवादमा एउटा ठोकुवा गरेका छन्-‘लामो समय नेतृत्व लिएका दल र नेताले विगत ५० बर्षमा गर्न नसकेको काम मैले ५ बर्षमा गरेर देखाउँछु।’
उनले निकै विश्वस्त भएर भनेका छन् ‘मसँग स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना, स्थानीयको विश्वास र केही गरि देखाउने अठोट छ,’ उनी थप्छन् ‘राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेहरूले केही गर्नेवाला छैनन्, अब सफल व्यावसायीहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेर राजनीतिलाई पनि सफल बनाउनु पर्छ।’
सरावगी भन्छन्- ‘मैले व्यवसायबाटै धेरै कमाउन सक्छु, कमाउन मलाई राजनीति चाहिदैन, तर यो वीरगंजको विकासका लागि मैले आफ्नो व्यावसायलाई पनि किनारामा राखेर अगाडि बढ्दै छु, मेरो एकमात्रै सपना छ-वीरगंजको विकास।’
वीरगंजमा टेकनारायण भट्टराईले सरावगीसँग गरेको संवादः